Qaraxii Muqdisho: Dareenkii Shacabka oo dariiqyada usoo baxay - BBC News Somali
Weer cas ayaa astaan u noqday mudaharaadada Muqdisho, ee ay dadka cadhaysan ee u soo baxay dariiqyadu kaga falceliyeen qaraxii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhacay.
Ragga iyo dumarka magaalada, askarta nabad gelyada iyo xataa saraakiisha dawladda ayaa dhamaantood maro cas ku xidhan madaxa si ay u muujiyaan midnimo iyo u damqashada boqolaalkii qof ee lagu dilay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxii uu dhaliyey baabuurkii xamuulka ahaa ee walxaha qarxa lagu soo raray.
"Weerkani wuxu astaan u yahay dhiigga dadkayagii lagu dilay qaraxa" ayey tidhi gabadh ku tiirsanayd gidaarka Istaadyoonka oo uu ka socday banaan bax ay soo qaban qaabisay dawladda hoose.
"Hadii ay dadka Soomaaliya midoobaan cid kasta way ka adkaan" ayay tidhi gabadh kale oo jilbaabkeeda weer ku dul xidhatay.
Dadkii isku soo baxay, intii ay sugayeen Ra'isal Wasaaraha iyo Madaxweynaha oo imanayey, waxay ku dhawaaqayeen hal ku dhegyo Al-Shabaab liddi ku ah.
Kumanaan qof baa soo baxay, isku soo bax kan oo kale ah hore looma arag marka ay dhacaan qaraxyadii hore u dhici jiray.
Mudaharaaddo yaryar baa dhici jiray, laakiin dadku waxay ka baqi jireen in ay kooxda Islaamiyiinta ahi calaamadsadaan.
Banaan baxa iyo gadoodkii ka dhacay wadooyinku waxay muujiyeen muuqaal ka duwan kii qaraxii Sabtidii dhacay oo waxay jawigii Muqdisho ka jiray ee cabsida ahaa u rogeen cadho.
Waana waxa ka dhigaya qaraxan mid kuwii hore ka duwan oo noqon kara is bedel kale.
"Al-Shabaab waxay ku bilaabeen in ay 10 qof dilaan, waanu ka aamusnay, hadana 20 bay dileen, markii dambena boqol bay dileen, imikana 300 oo rayid Soomaali ah oon waxba galabsan bay dileen" ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmajo
"Waxaanu idiin sheegaynaa in maanta laga bilaabo aanu dhamaantayo nanahay askar oo aanu halkiina idiinku iman doono. Dib dambe ugu dul qaadan mayno in wiil iyo gabadh dambe oo Soomaali ah la dilo, calankanna waanu difaacaynaa" ayuu ku daray.
Laakiin dhawaqa rasaas ka dhacaysay goobtii qaraxu ka dhacay ee isgoyska Kiiloomitir 5 waxay muujinaysay in shacabku meesha ka yaacayeen.
Shiid baa socday, rasaas baa la riday dadna waa lagu dilay, wax kalena ma ahayne dad cadhaysan baa isku soo baxay meeshana waxa joogay dhawr askari oo dadkaa cadhaysnaa xakamayn kari waayey.
Waxa haboon in shacabka cadhaysan si taxadar leh loo hago oo in ay Al-Shabaab ka soo horjeedaan la garto ee aanay dawladda iyo ciidanka nabad galyada oo aan weeraradaa waxba ka qaban aanay ahayn waxa ay ka cadhaysnaayeen.
Al-Shabaab may sheeganin in ay iyagu weerarkaa qaadeen, sababtuna malaha waa in tirada dadka rayidka ah ee lagu dilay badnayd.
Waa suurto gal in aan weerarka lala damacsanayn Kiiloomitir 5. Xog laga helay laamaha nabad gelyada ayaa sheegtay in baabuurka xamuulku soo dhaafay goobo kaantarool oo aan waaweyneyn, xamuulka saaraana wuxu ahaa walxaha qaraxa oo gudaha dalka lagu farsameeyey, iyo miinooyinka milatarigu adeegsado oo lagu soo guray jawaano loo eekaysiiyey kuwo bariis ku jiro. Markii baabuurku gaadhay Kiiloomitir lix ayaa laga shikiyey, dabeetana waxa loo qayshay askartii goobta joogtay.
Darawalkii wadaynay markaasuu baabuurkii qarxiyey isagoon joojinin ba. Wax isku beegmay uun bay ahayd oo markuu qarxay baabuurku waxa ag maraysay booyad shidaal sidda, waana sababta dhimashadu u badatay.
Isgoyskaas oo ah ka ugu saxmadda badan kuwa Muqdisho oo waliba waxay ahayd saacadihii dadku ugu badani goobtaa marayeen, todobaad bilowgii oo Sabti ahna way ahayd oo qaraxii goobta ka dhacay wuxuu mar qudha meeshii ka baabuurta iyo dadku is dhaafi kari la'aayeen ka dhigay cidlo banaan.
Hase ahaatee, xogaha laga helayo laamaha nabad gelyadu iskuma raacsana halka weerarka lala doonayey.
Baryihii hore weerarada Al-Shabaab ee "waaweyni" waxa horrayn jiray bamb yar oo lagu qarxiyo kadinka hore si uu ugu furmo weerarka labaad ee gudaha baabuurka la qarxinayo loo geliyo oo khasaare weyni uga dhashay.
Markan se baabuur yar oo isna walxaha qarxa lagu soo rakibay ayaa la joojiyey intaanu qarxin oo dirawalkiina waa la xidhay, hase yeeshee wuu qarxay oo dad baa halkaa ku dhintay. Dirawalka waxa lagu soo oogay eed ah inuu hore uga qayb qaatay weerar weyn oo Muqdisho ka dhacay waxaana la rumaysan yahay inuu yahay xubin Al-Shabaab ka tirsan.
Image caption Meesha uu weerarka ka dhacay waxaa ka socdo dib u dayactir
Labada baabuur laba waddo oo kala duwan bay marayeen laakiin waxaa la moodaa in ay labuduba ku socdeen madaarka oo ah "khadka cagaaran" ee Muqdisho oo ah halka ay xafiisyada Qaramada Midoobay iyo safaaradaha dawladaha shisheeye ku yaalaan. Waana halka lala beegsanayey ama waxa lagu waday wasaaradda arimaha dibada ama saldhigga milatari ee Turkiga ee cusub.
Waxa jiray qarax kale oo ka dhacay meel magaalada duleedkeeda ah oo aan aad looga waramin, waxaanu dhacay qiyaastii isla wakhtigii uu qaraxa labaad dhacay, waana suurto gal inuu qorshe fashilmay ahaa.
Xoogagga nabad gelyada waxa laga sugayaa in ay warar dheeraad ah oo qaraxan ay kaga waramayaan sheegaan iyo dedaalada la wado ee lagaga hortagayo weerarada kale ee Al-Shabaab.
Dadka banaanbaxayey ee cadhaysnaa ee weerka cas xidhnaa waxa ka mid ahaa nin sawir dhaba ka bixiyey dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
"Dadkan ma joojin karno, way nagu dhex noolyihiin oo Ilaahay uun baa naga qaban kara" ayuu yidhi.
Wararka qarixii isgoyska Soobe